Steel Spool mbukota Plastic Baling Waya - China Ningbo Judin Special Monofilament
Steel Spool mbukota Plastic Baling Waya
Osisi Spool mbukota Plastic Baling Waya
Plastic Spool mbukota Plastic Baling Waya
4 x 4 mm Monofilament Plastic Waya
High ike ọdụdọ
Ezigbo maka RDF Bailing
Dị na bespoke tinye mgbalị na ọkọlọtọ nha
RDF, ma ọ bụ Etinyela ewepụtara Mmanụ, na-eji a technology na-arụpụta ike n'efu na bụ ekwesighi ka omenala imegharị ihe maka iji. N'ịghọta mkpa maka a baling waya na adabara RDF, anyị mepụtara ngwaahịa nke kwesịrị ekwesị ka baling n'efu maka n'igba ihe oku na nzube.
Mgbe baling na strapping siri ike n'efu maka n'igba ihe oku, omenala ígwè baling waya ga-ewepụ tupu ọkụ usoro amalite. Nke a bụ ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ na oké ọnụ.
Ọhụrụ anyị JUDIN Plastic Waya nanị ike na-arụpụtara site Judin nwere ike nsure n'oge n'igba ihe oku usoro inye a calorific uru.
Ibu kwa mita: 0,018 n'arọ
Dimension nke Roll: φ 550 x 270mm
Tensile ezumike na otu ogologo: 5000 N
Tensile ezumike na gburugburu na eriri: 4800 N
Elongation na ezumike na otu ogologo: 15%
Elongation na okpukpu na eriri: 9%
Bales nwere ike kwajuru na ite-ọku uku n'ụzọ zuru ezu ọbọp enweghị aka nke ga budata azọpụta oge na ego site n'imeziwanye nhazi usoro.
Ọnọ ke 13000 Meter-esi anwụde, erikpu naanị 235 kg, nke bụ Ẹkot dị 750 kg ígwè waya. Ya mere, mgbe ruo eruo na RDF / SRF Baler na proprietary oriri osisi (nke dị ịtụ) na njikwa na oru ego e agbanweta esi anwụde na-budata belata, nke bụ a uru na operatives.
Onye ọ bụla ukwu ga a na-emepụta 2800 Bales (dabere na bale nha nke 1.2m X 1m X 1m) na ya ga-azọpụta ịrịba ichekwa oge maka operatives. The Judin Plastic Waya nwere a na-agbasa nje Ẹkot ala tensile ígwè waya bụ anụ / siri ike na-eji.
The ojiji nke JUDIN Plastic Waya negates ntaramahụhụ a na-anakwa ndị ka n'ọnụ ọgụgụ nke EU incinerators iji weghachite ígwè waya ha ọkụ, ka ọ dị ugbu amị na-eri ego.
Clients iji JUDIN Plastic Waya ga-emeghe n'ihu ebe / ohere hazie ha ihe onwunwe.
Previous: Osisi Spool mbukota Plastic Baling Waya
4 * 4 Plastic Baling Waya
4x4 Plastic Baling Waya
Inflammable Lindex Plastic Baling Waya
Inflammable Macpress Plastic Baling Waya
Inflammable Metal Spool Baling waya
Inflammable PITA Baling Waya
Inflammable PITA Square Baling Waya
Inflammable Presona Plastic Baling Waya
Inflammable Sacria Machines Plastic Baling Waya
Inflammable UnoTech Plastic Baling Waya
Inflammable Whitham Mills Plastic Baling waya
Metal Spool Baling Waya
egweri Baling Waya
egweri Plastic Baling Waya
Recycling Baling Waya
Recycling Plastic Baling waya
Okwu: # 3 Ind & Td Road, Jishigang Industrial Park, Yinzhou District, Ningbo, 315171, PR China